သတင်း - ကျွန်ုပ်သည် Mac မှဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်သည် Mac မှ (စာမျက်နှာ ၁၆)
Apple Park တွင်အစုရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
ဒီနေ့ပစိဖိတ်ဒေသ ၉း၀၀ တွင် Cupertino ကုမ္ပဏီသည်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ...
မြို့ကြီး ၈၂ ခုရှိကျောင်းသားများအတွက် Apple ၏ Apple Music Promotions ကို Apple တိုးချဲ့လိုက်သည်
HomePod တွင် Podcast ကစားရန် Siri ကိုမည်သို့မေးရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့ Podcast မှာ Siri ကိုပြောပြနိုင်မယ့်မက်ဆေ့ခ်ျတွေအကြောင်းသင်ခန်းစာ၊ ငါတို့ Podcast ကိုနားထောင်ချင်တယ်၊ ဖွင့်ချင်တယ်၊ တိုးချင်တယ်၊
HomePod ကို Apple TV စပီကာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
Apple က၎င်းကိုမကြေငြာသော်လည်း Apple Speaker မှတစ်ဆင့်အသံထုတ်လွှင့်ရန် Apple TV နှင့် HomePod ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည့်မေးမြန်းချက်များ၏ ၅၂.၃% ကို HomePod သို့ကျေနပ်လောက်ဖွယ်အဖြေပေးခဲ့သည်
Loup Ventures ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သောနောက်ဆုံးပေါ်ဉာဏ်စမ်းစမ်းသပ်မှုများအရ Apple ၏ HomePod သည် ...
ပထမ ဦး ဆုံး HomePods ကိုလက်ခံရရှိ, အဲလက်စ် Gale, ထုတ်ကုန်ငွေကြေးပြန်အမ်းနှင့်အခြား။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
ဖေဖော်ဝါရီလ၏တိုတောင်းသောလ၏ပထမသီတင်းပတ်သည်ဤတနင်္ဂနွေတွင်ကုန်ဆုံးပြီးငါ Mac မှဖြစ်သည်။
အချို့သော AirPod များသည်ဖလော်ရီဒါတွင်မီးလျှံတက်နေသည်
AirPods နှင့်ပတ်သက်။ ယနေ့ရောက်ရှိလာကြောင်းသတင်း။ Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီမှကြိုးမဲ့နားကြပ်များ ...
iPod HiFi မှ HomePod သို့သွားရန်နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်
နှိုင်းယှဉ်မှုများကိုမုန်းတီးသည်ဟုလူသိများသည်၊ သို့သော် HomePod တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်၍ စကားမပြောနိုင်၊
သုံးစွဲသူများစွာ၏ YouTube လိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။
Walnut Creek Apple Store ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်
Walnut Creek Apple Store ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ ၎င်းသည် Broadway Plaza စျေးဝယ်စင်တာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည် Apple Park visit ည့်သည်စင်တာနှင့်ဆင်တူသည်။
အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ၊ လာမည့်နွေရာသီတွင်အသစ်သော emoji အသစ် ၁၅၀ ကျော်လာမည်
ထိုအ emoji ကန့်သတ်ရှိသည်ထင်မထားဘူးနှင့် 150 ခန့်အသစ်သော emoji ဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ...
မနက်ဖြန်တွင်ပထမဆုံး HomePods သည်ဤထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုကိုတစ်နေ့တာအတွက်ကြိုတင်မှာယူထားသောဖောက်သည်များထံသို့စတင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
HomePod သည် Apple Music နှင့် iTunes Device ပေါ်တွင်သုံးစွဲသူ၏ကန့်သတ်ချက်အပေါ်တွင်မူတည်မည်မဟုတ်ပါ
HomePod သည် Apple Music ကိုကျွန်ုပ်တို့နားထောင်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အရေအတွက်အများဆုံးနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထို့အပြင် Mac ပေါ်ရှိဂီတကိုနားထောင်သည့်အခါ HomePod သို့ဂီတကိုလွှင့်ပစ်မည်မဟုတ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ Apple Stores သည် AliPay ကဲ့သို့သောတရုတ်မှငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်းများကိုလက်ခံလိမ့်မည်
Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီမှအာရှပစိဖိတ်နှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်လိမ္မာပါးနပ်စွာအခြေအနေဖြင့် ...
Apple သည် Mac Pencil တွင် Apple Pencil အသုံးပြုမှုကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်
iMac Pro မော်ဒယ်အားလုံးသည်ရရှိနိုင်သည့်ရက်ကိုပေးသည်
တစ်လနီးပါးကြာသော် iMac Pro အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးသည်ယခုအခါတင်ပို့ရန်အတွက်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးဖြစ်သော 14-core မော်ဒယ်အပါအ ၀ င်တင်ပို့ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အက်ပဲလ်စတိုးပြုပြင်မွမ်းမံရေးအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒါဟာ Texas ပြည်နယ် Southlake ဆိုင်အထိပါပဲ။
Apple Stores သည်အပတ်စဉ်သက်တမ်းတိုးနှုန်းကိုလိုက်နာသည်။ အဓိကအားဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ၂၀၀၉ မတိုင်မီက Apple Store တွင်ပြုလုပ်သည်
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ HomePod ကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသောပထမဆုံးသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့အမှာစာများ၏အခြေအနေသည်“ ပြင်ဆင်နေစဉ်” သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုမြင်ကြပြီးပစ္စည်း၏ပေးပို့ချိန်နီးကပ်လာသည်။
HBO သည် JJ Abrams စီးရီးအသစ်ကိုရရှိသည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် HBO ၏အသံဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားကမ္ဘာတွင်အတွေ့အကြုံကဒါရိုက်တာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ JJ Abrams ထံမှလာမည့်စီးရီးများအပေါ်အခွင့်အရေးများကိုလွှဲပြောင်းယူရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်းဖော်ပြနေသည်။
သင်၏ Mac တွင် 32-bit application ရှိပါကယနေ့ကြိုးစားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော applications များသည် 64-bit environment တစ်ခုဖြစ်ပြီး 64-bit mode macOS ဖြင့်လည်ပတ်မည်လားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်
Apple ကဒီနွေရာသီမှာယူအက်စ်မှာ Spotify ကိုကျော်တက်နိုင်တယ်
Wall Street ဂျာနယ်၏အဆိုအရအက်ပဲဂီတသည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် Spotify ၏ ၀ ယ်ယူသူအရေအတွက်ထက်များနိုင်သည်ဟုယူအက်စ်တွင်လက်ရှိတိုးတက်မှုနှုန်းအရသိရသည်။
စာရင်းသွင်းထားသည့် Apple Watch သုံးစွဲသူများအတွက် Apple ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုကိုစတင်ခဲ့သည်
Apple ရဲ့ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုစတင် စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်နှလုံး၏အပြုအမူများကိုစုဆောင်းရန်ကြိုးစားသည်။
Apple ၀ န်ထမ်းများသည် ၅၀% လျှော့စျေးဖြင့် HomePod ကို ၀ ယ်နိုင်သည်
မကြာသေးမီက Apple ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြန့်ချိသည့်အစဉ်အလာအတိုင်း HomePod ကို ၀ ယ်သော ၀ န်ထမ်းအားလုံးအတွက် ၅၀% လျှော့စျေးပေးသည်
ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဘရာဇီးတွင် Apple Pay တရားဝင်ရှိသည်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကမှကျွန်တော်က Mac ကနေ Apple Pay ကိုဆင်းပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နာရီပိုင်းအတွင်း Apple ၏ရှယ်ယာများထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်၏စံချိန်တင်ရလဒ်များကိုနောက်တစ်ကြိမ်မရောက်ရှိတော့ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း
AppleCare + သည်Australiaစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တွင်ရှိသည်
AppleCare + ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်သည်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများမှာတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
Youtube TV ကို Apple TV အတွက်တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်
ဤသည်မှာ Apple ၏ပထမသုံးလပတ်ဘဏ္financialာရေးနှစ်ဘဏ္resultsာရေးရလဒ်များဖြစ်သည်
အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ဘဏ္fiscalာရေးနှစ် ၂၀၁၈ ဘဏ္quarterာရေးနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွက်ဘဏ္resultsာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။
ပထမဆုံး 18-core iMac Pro Benchmarks ရောက်လာတယ်။
18-core iMac Pro ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Multi-core Benchmark ရမှတ်သည် 50.000 မှတ်အထိရောက်သည်။
HomePod software ကိုမွမ်းမံနည်း
HomePod သည်အလွန်များပြားသောနိုင်ငံများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ပြီးဖြစ်သည်။
Apple Park မှ ၀ န်ထမ်းများက Cupertino တွင်အိမ်များပိုမိုရှာယူကြသည်
Cupertino တွင်အိမ်ရာမရှိခြင်းသည်အက်ပဲလ်အားမြို့တော်ကောင်စီအား tab ကိုရွှေ့ရန်နှင့်၎င်း၏ဝန်ထမ်းများအတွက်အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရန်ဖိအားပေးရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် TodoApple Podcast ကို iTunes နှင့် YouTube မှတစ်ဆင့် download ရယူနိုင်သည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊ သြစတြီးယား၊ ဗီယင်နာရှိ Apple Store အသစ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင်ထိုနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများကပြုလုပ်သောသုတေသနအရ Apple သည် Apple Store အသစ်ကိုဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Apple က iMac Pro ကို ၁၈ လုံးနဲ့စတင်တင်ပို့ပါတယ်
Cupertino မှလူငယ်များသည် ၁၈-core iMac Pro ကိုပထမဆုံးတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး 18-core မော်ဒယ်လ်သည်၎င်း၏ထွက်ပေါ်လာမည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများမရရှိသေးဘဲစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်၌ Apple သမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
Apple သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်ရလဒ်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီး Wall Street မှလေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားရာတွင်သမိုင်းတွင်လည်ပတ်မှုအရှိဆုံး၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်မှန်းထားသည်။
Scottsdale ရှိ Apple Store ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
အရီဇိုးနားတွင်တံခါးဖွင့်မည့် Apple Store သည်အထူးသဖြင့်ဗိသုကာစတူဒီယိုနော်မန်ဖောတ်စ်မှဒီဇိုင်းမလုပ်နိုင်သည့်အက်ပဲလ်စတိုးတွင်ဖြစ်သည်။
အက်ဒီတီကူသည်ရုပ်ရှင်နှင့်တေးဂီတပွဲတွင်အဓိကကျသောဟောပြောသူဖြစ်ပြီး Apple TV အကြောင်းပြောဆိုရန်ဖြစ်နိုင်သည်
Eddy Cue သည်ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ မီဒီယာနှင့်ကွန်ဖရင့်များအတွက်အဓိကကျသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သော SXSW event ကိုဖိတ်ကြားခံရသည်။
Apple Pay ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကုန်သည်နှစ် ဦး လျှင်တစ်ယောက်လက်ခံပြီးဖြစ်သည်
စတင်မိတ်ဆက်ပြီးလေးနှစ်အကြာ Apple ၏အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရှိကုန်သည် ၂ ဦး လျှင် ၁ ယောက်တွင်ရနိုင်သည်။
Lightroom Classic 7.2 အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများမကြာမီလာမည်
Lightroom Classic မှ version 7.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ ဤ update သည်အထူးသဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်စက်များပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်အာရုံစိုက်သည်။
Nashville ရှိ Green Hills Apple Stores နှင့် Lyynwoord ရှိ Alderwood ကို Apple မှပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက်ပိတ်လိုက်သည်
လာမည့် Apple Stores နှစ်ခုသည် Nashville နှင့် Lynnwood တွင်တည်ရှိပြီးခေတ်မီဆုံး Apple Stores ၏အလှဆင်မှုအသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Apple သည် Paramount ကွန်ယက်မှ Dana Tuinier ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
အက်ပဲလ်ဟာသူ့ရဲ့အသံထုတ်လွှင့်မှုဌာနဌာနအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွေဆက်လုပ်နေပြီးသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလောင်းကစားလိုက်တယ်။ သူသည် The Paramount Network မှအကြီးတန်းအမှုဆောင် Dana Tuinier ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသိမ်းယူခဲ့သည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်
Apple သည် HomePod ဝယ်လိုအားကိုအလွန်အကျွံတောင်းခံခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
ဂျနီဖာဘေလီက Apple Pay နှင့်၎င်း၏ ၂၀၁၈ တွင်တိုးတက်မှုအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတွင် Apple Pay ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ချဲ့ထွင်မှုအကြီးအကဲဂျနီဖာဘေလီသည်ကွန်ဖရင့်တွင် ...
Apple သည် coprocessor များပါသော Mac အသစ်သုံးခုကိုပြုလုပ်နေသည်
Bloomberg ၏အဆိုအရအက်ပဲလ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည့် Mac အသစ်သုံးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ Apple မှထုတ်လုပ်သည့် coprocessor အသစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်မည့် Macs များကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
2018 ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ web version တွင် OmniFocus ရှိနိုင်သည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် OmniFocus နှင့် OmniPlan ဗားရှင်းကိုသူတို့၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ရန် web တွင်မြင်ရလိမ့်မည်။
Apple သည် Mac နှင့် Multi Cut Pro လိုင်စင်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဗီဒီယို Post-production အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုထောက်ပံ့သည်
Apple သည်မက်စ်၊ ကင်မရာများနှင့် Final Cut Pro X နှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတိုတိုလုပ်ရာတွင်ကူညီသည်။ ပါဝင်သူများသည် Apple သင်တန်းမန်နေဂျာများနှင့်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများနှင့်တွေ့ဆုံသည်
MacOS 10.13.4 ပထမ beta အတွက်ပြင်ပ GPU လိုက်ဖက်တဲ့တိုးတက်မှုများ
macOS High Sierra 10.13.4 သည်ပြင်ပ GPU များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ၎င်းအရံပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုထပ်ထည့်သည်။
Apple သည် Apple Park ၏ကဏ္ sections ၅ ခုကိုရယူရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်
အက်ပဲပန်းခြံသည် Cupertino City Council မှနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်များရရှိသည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းခွင်သုံးစက်များအားလုံးရှင်းသည်အထိနောက်ဆုံးခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် Qualcomm ကိုယူရို ၉၉၇ သန်းဖြင့်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့သည်
အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၂၇ ဒသမ ၂၄ အထိတိုးမြှင့်လိုက်သောကားအရေအတွက်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Apple သည် La La Land ဒါရိုက်တာ Damien Chazelle ထံမှစီးရီးအသစ်တစ်ခုတောင်းခံသည်
ဒီနှစ် ၂၀၁၈ မှာအရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာအက်ပဲလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမရပ်တန့်စေပါဘူး။
Logic Pro X ကိုအရေးကြီးသောသတင်းများနှင့်အတူဗားရှင်း 10.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Logic Pro X ကို version 10.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် Smart Tempo, Retro Synth
HomePod စတင်တင်ဆက်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန် Sonos က ၂ Sonos One ၂ ဒေါ်လာစီကိုဒေါ်လာ ၃၄၉ ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
Sonos သည် HomePod နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကင်ပိန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား Sonos One နှစ်ခုအားဒေါ်လာ ၃၄၉ ဖြင့်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား HomePod ရနိုင်သည်။
MacOS High Sierra 10.13.4 က Podcast app တစ်ခုယူဆောင်လာနိုင်သည်
Apple သည် Podcast application ကို iTunes နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲဖွင့်နိုင်ပြီးကစားသမားအနေဖြင့် iTunes ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးအက်ပ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်
Fitbit မှ Pebble စမတ်နာရီများသည်ယခုနှစ်ဇွန်လတွင်အထောက်အပံ့များကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
HomePod နှင့် QuickTime player တို့သည် FLAC ကိုအထောက်အကူပြုသော်လည်း iTunes မှာမူမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
FLAC အသံအမျိုးအစားသည် Apple ၏နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာဖြစ်သော HomePod တွင်ထောက်ပံ့မှုရခဲ့သော်လည်း iTunes နှင့်သဟဇာတမဖြစ်သေးပါ။
MacOs High Sierra 10.13.4 ကအနာဂတ် 32-bit app များနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည်။
Apple က macOS High Sierra 10.13.4 beta ကိုနောင်လာမည့် macOS ထုတ်ကုန်တွင် 32-bit application များ၏သဟဇာတမဖြစ်စေရန်အကြံပေးခဲ့သည်။
Apple သည် Xcode 9.3 ကို Battery Usage Analytics ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
developer များသာရရှိနိုင်သော Xcode 9.3 ၏ပထမဆုံး beta သည်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုအဓိကအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ကမ်းလှမ်းသည်။
Adobe သည် Photoshop CC နှင့် Adobe XD CC တို့ကို Sensei လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အသစ်ပြောင်းသည်
Adobe သည် Sensei လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အခြားသီးခြားဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်များပါ ၀ င်သော Photoshop CC နှင့် Adobe XD CC သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
HomePod ကိုခံစားရန် Apple Music ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် iTunes, podcast နှင့် Beats ဘူတာများမှသီချင်းများကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုမည်။
အကယ်၍ သင်သည် HomePod ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသော်လည်း Spotify မှ Apple Music သို့မပြောင်းလိုပါက HomePod က Apple Music ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
HomePod ၏ AppleCare + ကို ၃၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချမည်
HomePod ၏ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ကိုတရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သောကြောင့်အက်ပဲလ်သည် AppleCare + အာမခံသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်၏စျေးနှုန်းများကိုသုံးစွဲသူများအားရရှိနိုင်စေခဲ့သည်။
စျေးကွက်သို့ရောက်သောအခါ HomePod တွင်အင်္ဂါရပ်အားလုံးမရှိပါ
HomePod ၏မူလဗားရှင်းတွင်စပီကာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသောအသံပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုစပီကာအားစပီကာအားညွှန်ပြရန်အသံလုပ်ဆောင်ချက်များမရှိပါ။ ဒီနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာဆော့ဗ်ဝဲမွမ်းမံမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ApplePom ၏ HomePod ၏ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်မျှလေ့လာသင်ယူနေကြသည်။
Apple သည် Apple Store အဟောင်းကိုဆက်လက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပြီး၊ Nashville တွင်နောက်ထပ်ဖြစ်သည်
Apple ၏စပီကာကိုစတင်နိုင်မည့်နောက်ဆုံးရက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေ
အနုပညာရှင်များအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းဂီတ, ဂီတသမားများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဝန်ဆောင်မှုယခု beta ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ
အက်ပဲလ်သည်အက်ပဲဂီတအတွက်အနုပညာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုကို beta အဆင့်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထို ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသူတို့၏သီချင်းများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုမဆိုသိရန်ခွင့်ပြုသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Apple ကလာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မြှင့်တင်ရန်စီစဉ်နေသကဲ့သို့၊
Apple က Malala ဖောင်ဒေးရှင်းမှမိန်းကလေးများ၏ပညာရေးကိုအားပေးသည်
တစ်ဖန် Apple နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများနှင့်၎င်း၏ခြေလှမ်းများ ...
Pixelmator Pro သည်သီးနှံအသစ်နှင့် bug fixing features အသစ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
Pixelmator Pro သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပုံအချိုးအစားနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးအဓိက update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် bug များကိုလည်းပြုပြင်ပေးသည်။
Def Leppard ၏ discography ကို Apple Music တွင်ရနိုင်သည်
Def Leppard အဖွဲ့သည်၎င်း၏ကတ်တလောက်တစ်ခုလုံးကို Apple Music သာမက Spotify နှင့်အခြားဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
ကွတ်သည် Animoji မှတစ်ဆင့်ကျောင်းဆင်းပွဲမိန့်ခွန်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
ဖြစ်ရမယ်။ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှစတိဗ်ဂျော့ဘ်၏ဒဏ္legာရီဘွဲ့ရမိန့်ခွန်းကိုအမှတ်ရခြင်းဖြင့် ...
Tim Cook သည်ဥရောပတက္ကသိုလ် ၇၀ တွင်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုမြှင့်တင်သည်
Apple ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Cook ကပရိုဂရမ်ကိုဥရောပတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းပေါင်း ၇၀ တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်စတင်ခဲ့သည်။
Disney သည် iTunes အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အား၎င်း၏ streaming platform ကိုငှားရန်ငှားသည်
Disney သည် iTunes ၀ န်ထမ်းဟောင်း ၀ န်ထမ်းအားအနာဂတ်တီဗီ၏ဒုဥက္ကpresident္ဌအဖြစ်သို့မဟုတ်ဒစ္စနေး၏ထုတ်လွှင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းသည်။
အက်ပဲလ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်ကုမ္ပဏီများ၊ ဒေတာစင်တာကြီးများသို့မဟုတ်အဆောက်အအုံများအတွက် ၀ ယ်ရန်အတွက်သာအဓိကထားသည်။
Andy Wharhol ၏ Macintosh တံဆိပ်ပန်းချီကားကိုလေလံတင်ရောင်းချသည်
Andy Wharhol ၏ ၁၉၈၅ ကြော်ငြာကင်ပိန်းအတွက် Macintosh လိုဂို၏ပန်းချီကားသည်စျေးကွက်တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀ ခန့်ဖြင့်လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
Donald Trump က Tim Cook အားသူ၏အလုပ်အတွက်အမေရိကန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်
အက်ပဲလ်သည်ဇိမ်ခံစမတ်နာရီဈေးကွက်မှထွက်ခဲ့သော်လည်း Tag Heuer ကမူ၎င်း၏ခေါင်းကိုလှန်လိုက်သည်
ဆွစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Tag Heuer သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိန်နာရီ ၃၅၀ ကျော်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးဒေါ်လာ ၁၉၇,၀၀၀ တန်ဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမတ်နာရီကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Kristen Wiig ကို Apple ၏ VOD ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သရုပ်ဆောင်မည်
ဟာသသရုပ်ဆောင် Kristen Wiig သည်မကြာမီထုတ်လုပ်မည့် Apple ဟာသတွင် Reert Witherspon နှင့်အတူ Cupertino Boys VOD ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်သည်လူ ၅၀ ကိုအိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန်ရှာသည်
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်က Apple တွင်တွေ့ခဲ့ဖူးသောအရာဖြစ်သော်လည်းနေရာအနည်းငယ်သာဖွင့်ရန်ခက်ခဲသည်။
Tim Cook သည် Apple မှယခုနှစ်အတွင်းသတင်းအချို့အကြောင်းကြားရန်အီးမေးလ်ပို့သည်
အက်ပဲလ်သည်ထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီ ၁၀၀ တွင်အဆင့် ၆ တွင်ရှိသည်
Apple သည် Microsoft, Intel, Cisco, IBM သို့မဟုတ် Alphabet အဆင့်ရှိထိပ်တန်းနည်းပညာ ၁၀၀ နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအများဆုံးကုမ္ပဏီများအနက်အဆင့် ၆ တွင်ရှိသည်။
MacOS 10.13.3 ၏ပဉ္စမ beta တွင် Apple သည် Messages ကိုတိုးတက်စေချင်သည်
ယမန်နေ့က Apple မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော beta တွင် MacOS 10.13.3 ၏ပဉ္စမ beta သည်အချို့သောကွန်ပျူတာများတွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုညွှန်ပြနေပုံရသည်။
Podcast9× 17: သတင်းနှင့်လိမ်လည်မှု
နောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်အိုင်ဖုန်းနှင့် Soy de Mac သတင်းအဖွဲ့သည်အက်ပဲလ်နှင့်နည်းပညာကိုဝိုင်းရံထားသည့်အရေးအကြီးဆုံးသတင်းများအကြောင်းမိုက်ခရိုဖုန်းရှေ့တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
BMW သည် CarPlay ကိုသူတို့၏ကားများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်နှစ်စဉ်အခကြေးငွေပေးလိုသည်
BMW သည် Apple ၏သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှု CarPlay ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်နှစ်စဉ်ကြေးပေးရန်လိုသည်။ ဤသည် 2019 ကနေထိရောက်သောပါလိမ့်မယ်
Apple Pay သည်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်အာရှတွင်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်လျက်ရှိသည်
Apple Pay သည် Apple Pay နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောဘဏ်များနှင့်ချေးငွေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားဆက်လက်တိုးချဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အမေရိကန်နှင့်ဘဏ်များအကြားတွင်အကြီးမားဆုံးဘဏ်များနှင့်ချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများရှိသေးသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Ford ကုန်တင်ကားများသည်လည်း CarPlay ကိုထည့်သွင်းသွားမည်
ပြီးတော့မနေ့ကပဲတိုယိုတာနဲ့ Lexus ရဲ့ CarPlay ကိုသူတို့ရဲ့မော်ဒယ်သစ်တွေမှာထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်စရာတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။
ခဏကြာတော့ Mac မှာ Nintendo Switch ဂိမ်းကိုကစားနိုင်မှာပါ
Nintendo 3DS အတွက် Citra emulator တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော developer အဖွဲ့သည် PC အတွက် Nintendo Switch အတွက် Mac အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
တောင်ကိုရီးယားတွင်ပထမဆုံး Apple Store ကိုဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
ပြီးတော့ Apple ကိုအရသာရှိတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကို "သင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်" ပြပြီးတဲ့နောက်အခုကျွန်တော်သိပြီ ...
အက်ပလီကေးရှင်းဟာဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များရဲ့အမြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်ရန် Speedometer 2.0 ကိုလွှတ်လိုက်တယ်
Apple က Speedometer 2.0 ၏တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Lexus နှင့် Toyota သည်လာမည့်နှစ်တွင် CarPlay နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုမည်
ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူ Toyota သည် CarPlay နည်းပညာကို Lexus ဇိမ်ခံမော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲနှင့်အတူနောက်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်း၏ကားများသို့တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
အက်ပဲလ်သည် CES ကိုလက်လွတ်မခံဘဲ Augmented Reality ကုမ္ပဏီများနှင့်အစည်းအဝေးများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်
ထို့အပြင်၎င်းသည် Cupertino ကုမ္ပဏီတွင်အချိန်အတော်ကြာရှိနေပုံရသည် ...
ဒီနေရာတွင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားကြည့်ရှုရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ Apple Park ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုကိုသင်ရရှိသည်
သငျသညျ Apple ကပန်းခြံ၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် - ကြည့်ရှုဗီဒီယိုများကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား ကောင်းပြီ, ဒီနှစ် 2018 သူတို့အင်အားသုံးနှင့်အတူပြန်လာကြောင့်ငြိမ်သက်အေးဆေး။ ဒီမှာပထမ
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Apple ၏ HomePod သည်သုံးစွဲသူများသည်စမတ်စပီကာများကိုစိတ် ၀ င်စားလာသည့်အချိန်တွင်စျေးကွက်၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နဲ့ iMac Pro ကိုရယူပါ
iMac Pro ရောက်ရှိပြီး ၁၅ ရက်အကြာတွင်အချို့သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှ၎င်းသည်ယူရို ၁၀၀၀ လျှော့စျေးဖြင့်၎င်းကိုတွေ့နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
Apple Store တွင်မီးသတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၊ Apple ကဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ၊ macOS၊ Spectre နှင့် Meltdown တို့၏လုံခြုံရေးချို့ယွင်းချက်များနှင့်အခြားအရာများစွာသည်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
စပိန်နိုင်ငံရှိနေရာများစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသောမုန်တိုင်းများကြုံတွေ့ရသော်လည်းအမြဲတမ်းရှိနေသည်။
သင်၏ iCloud ဒေတာကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် Apple မှအတည်ပြုသော bug ဖြစ်သည်
ယခုအပတ်တွင် Apple သည်တရုတ်ပြည်မမှ GCBD ၏ဆာဗာများသို့အသုံးပြုသူများ၏အချက်အလက်များကိုရွှေ့ပြောင်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပရှိသုံးစွဲသူများသည်မှားယွင်းစွာလက်ခံခဲ့ကြသည်။
Meltdown နှင့် Spectre နှင့် ပတ်သက်၍ Intel CEO ထံမှသင်၏ဖောက်သည်များထံပေးစာ
Intel ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဒီသီတင်းပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းများကနေသေချာပေါက်သိနိုင်အောင် Intel ဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနေပါတယ်။ Mac များအားလုံးကို MacOS High Sierra 10.13.2 ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်
Star Wars: The Last Jedi အတွက်ဇာတ်ညွှန်းကိုအထူး MacBook Air တွင်ရေးသားခဲ့သည်
Star Wars မှ The Last Jedi ၏ဒါရိုက်တာနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူအဆိုအရ၊ ဤရုပ်ရှင်အတွက်ဇာတ်ညွှန်းသည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ MacBook Air တွင်ရေးသားခဲ့သည်၊ ဟက်ကာများနှင့်အင်တာနက်ယိုစိမ့်မှုများကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။
အက်ဖ်ဘီအိုင်ကအက်ပဲလ်အား Apple ကို“ မကောင်းသောနေရာ” အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးကိုရည်ညွှန်းသည်
Spectre နှင့် Meltdown ချွတ်ယွင်းချက်များကြောင့်ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များထံမှတရားစွဲဆိုမှုများကို Intel ကလက်ခံရရှိသည်
Intel chips ၏ဒီဇိုင်းအမှားကြောင့်ပြtheနာများကြောင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏ရှယ်ယာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကြောင့်ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်တရားစွဲမှုများလည်းရှိသည်။
Tim Cook သည်အခြားကုမ္ပဏီများ၏စီအီးအိုများနှင့်အတူ DACA အစီအစဉ်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်
အိမ်ဖြူတော်က Apple Watch နှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပတ်သတ်၍ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များဖြင့်အဆောက်အ ဦး များ ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားသည်
ap လုံခြုံရေးအသုံးပြုမှုကိုပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှစ၍ တိုးချဲ့ ...
Philips မှ Mac အတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုတင်ပေးပြီး Hue မီးသီးများကိုစီမံနိုင်သည်
Philips ကုမ္ပဏီသည် MWC ၏မူဘောင်အတွင်း၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် Mac အတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုတင်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌တပ်ဆင်ထားသည့် Hue မီးသီးများအားလုံးကိုစီမံနိုင်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
အချို့သောသြစတြေးလျအသင်းများသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Federation ရင်ပြင်ရှိ Apple Store ကိုဆန့်ကျင်ကြသည်
အချို့မဲလ်ဘုန်းမြို့အသင်းများသည်အဆောက်အအုံအားဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖက်ဒရေးရှင်းရင်ပြင်ရှိ Apple Store ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။
လာမည့်လတွင် Apple မှတရုတ် iCloud သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုတရုတ်တွင်သိမ်းဆည်းတော့မည်
လာမည့်လ မှစတင်၍ Apple သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒေတာစင်တာကိုစတင်မည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွင်းရှိတရုတ် iCloud အသုံးပြုသူများ၏ဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် Apple သည်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံတန်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်
သတင်းအသစ်များအရအက်ပဲလ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဂျင်မီအိုင်ဗင်း၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ပိုမို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သား။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပဲလ်ကိုစွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ ဤသတင်းနှင့်အတူ ...
Car audio giant Alpine သည် CarPlay နှင့်အတူ၎င်း၏ပထမဆုံး floating unit ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Carplay ပါရှိသည့် ၆.၁ မှ ၇ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Alpine ကယာဉ်များအတွက် multimedia player ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဇူးရစ်မြို့ရှိ Apple Store ကိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်
မကြာသေးမီကပင် Apple dwarfs ကြီးထွားလာနေပုံရသည်။ Apple Store တွင်အငြင်းပွားမှုများသည်ဖြစ်ပျက်မှုကိုမရပ်တန့်စေနိုင်ပါ။
ViewSonic သည် Thunderbold 8 Connection ဖြင့် 4K နှင့် 3K UHD Monitors များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ViewSonic အိမ်မှမော်နီတာနှစ်ခုကိုပြသထားပြီး 4K UHD နှင့် 8K resolution နှင့် Thunderbold3connection တို့ဖြင့်အရောင်များကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
Satechi သည် CES 2018 တွင် Apple Watch နှင့် iPhone အတွက် dual charging station ကိုပြသသည်
CES 2018 တွင်တင်ပြခဲ့သည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမြတ်သောအရာများအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။
iMac Pro ကိုအမေရိကန်စတိုးဆိုင်အချို့တွင်ဒေါ်လာ ၄,၉၉၉ အောက်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
၎င်းသည်စျေးကွက်ထဲတွင်တစ်လသာရှိခဲ့သော်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်မူ ၄ င်း၏အခြေခံစျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၄,၉၉၉ နှင့်အခွန်အနိမ့်ဖြင့်ခွင့်ပြုထားသောပြန်လည်ရောင်းချသူများတွင် iMac Pro ကို ၀ ယ်ယူပြီးဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားတွင်ပထမဆုံးအက်ပဲစတိုးဖွင့်တော့မည်။ ယခုတိုင်ဆမ်ဆောင်းရုံးချုပ်တည်ရှိနေသောတိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက် Apple ကမ္ဘာကိုပြသသည့်အနေဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ပိုစတာတစ်ခုက“ မင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်”
ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတရားစွဲမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရစဉ် Spotify သည်စာရင်းသွင်းသူသန်း ၇၀ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှု Spotify က ၀ ယ်သူသန်း ၇၀ ကိုကြေငြာလိုက်ပြီးဒေါ်လာသန်း ၁.၆ ဘီလီယံလိုအပ်ချက်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Apple သည်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Back to Univesity အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တွင် Back to University ဟုအမည်ရသည့် Cupertino လူငယ်များသည် iPad Pro သို့မဟုတ် Mac ဝယ်ယူရန် Beats နားကြပ်များကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
Meltdown နှင့် Specter တို့သည်လည်း Apple ပစ္စည်းများကိုထိခိုက်ခဲ့သည်
၎င်းသည်မကြာသေးမီလများအတွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းဖြစ်ပြီးအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ အက်ပဲလ်အတည်ပြု ...
ရောင်းရန်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များနှင့်အတူဖန်တီးခဲ့သော Steve Jobs ပုံတူ
အနုပညာရှင် Jason Mecier သည် Steve Jobs ၏ပုံတူကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏အကြွင်းအကျန်များကို Steve Isaacson ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် Walter Isaacson အသုံးပြုသောပုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီပုံတူကိုထပ်ရောင်းဖို့ပါ။
iMac Pro Stores, MacOS High Sierra beta၊ retro keyboard နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ငါ Mac ကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
အကယ်စင်စစ် SM Los ၏သွားတာနှင့်အတူတက်ရပြီသူအိမ်မှာကလေးငယ်များအတွက်အထူးနေ့, အကယ်စင်စစ် ...
ပိုမိုကောင်းမွန်သော Compression Video Codec ပြုလုပ်ရန် Apple ကအဓိကမဟာမိတ်အဖွဲ့တွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
Apple သည် Open Media Alliance နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိ h.50 ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ချုံ့နိုင်သည့် video codec ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
Toronto တွင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်မည့် Apple Store အသစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
အထင်ကရအက်ပဲလ်စတိုးဆိုင်သစ်တစ်ခုရရှိမည့်မြို့တော်မှာတိုရွန်တိုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတည်ဆောက်နေသည့် ၈၂ ထပ်အဆောက်အအုံကိုစီစဉ်ထားသည်။
NGO Attac သည်အက်ပဲလ်အားဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားနာရီအတန်ကြာအင်အားဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးနောက်တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Apple Shazam ကိုဝယ်ယူပြီးနောက် Cortana သည်သီချင်းများကိုအသိအမှတ်မပြုတော့ပါ
Shazam ကို Apple ကဝယ်ယူပြီးနောက်ပထမဆုံးထိခိုက်မှုမှာ Microsoft assistant Cortana ဖြစ်ပြီးမည်သည့်သီချင်းကိုမှအသိအမှတ်မပြုနိုင်တော့ပါ၊ အကြောင်းမှာ Shazam နှင့်သဘောတူညီမှုမရရှိသေးသောကြောင့်
eacay တွင် IMac Pro ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်စျေးနှုန်းများဖြင့်ရနိုင်သည်
iMac Pro အတွက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများသည် eBay တွင်စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ မှ ၁၇၀၀ ကြားရှိသည်။
မကြာသေးမီကပင် Apple သည်ရှင်းလင်းချက်များစွာပေးနေရသည်ဟုထင်ရသည်။
Samsung က Thunderbolt3နဲ့ပထမဆုံး QLED Curved Monitor ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် CES 2018 မကျင်းပမီရက်အနည်းငယ်အတွင်းအပြိုင်အဆိုင်များခြင်းနှင့် QLED နည်းပညာနှင့် Thunderbolt3ဆက်သွယ်မှုတို့ဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးကွေးကောက်မော်နီတာကိုပြသရန်အတွက်အားယူခဲ့သည်။
Intel processors မှာဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အမှားအယွင်းမရှိရင်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာနှေးကွေးစေနိုင်တယ်
မီဒီယာအဆိုအရဤဒီဇိုင်းအမှားသည် MacOS တွင်နှေးကွေးစေပြီး Windows အတွက်လည်းသိသာစေနိုင်သည်။
Apple ၏ဘဏ္itsာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်ကြေငြာမည်
စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် Apple ၏ရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်လာပြီ ကယ်လီဖိုးနီးယားကုမ္ပဏီက ...
iMix Pro ၏အတွင်းပိုင်းကိုကျွန်ုပ်သိသည်
လူကြိုက်များသော Mac အတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးနေရာ, disassembed နှင့် iMac Pro နှင့်၎င်းတို့၏မှတ်ချက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုက၏အတွင်းပိုင်းပြသထားတယ်။
Apple Park ကုလားထိုင်တစ်ခုစီသည်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ကုန်ကျသည်
Apple Park ကဏ္ sections တစ်ခုစီ၏ပရိဘောဂများအပါအဝင်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအကြောင်းကိန်းဂဏန်းများတဖြည်းဖြည်းချင်းများပြားလာနေသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန် iMac Pro ကအပူကိုဘယ်လိုဖြန့်ပေးသလဲ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကိုတွေ့မြင်ရန် iMac Pro တွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြာရှည်သောလုပ်ငန်းစဉ်များမှအပပရိတ်သတ်များကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
iMac Pro သည် Apple Store သို့စတင်ရောက်ရှိသည်
iMac Pro သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Apple Stores သို့စတင်ရောက်ရှိသည်။ သင်၏အနီးဆုံး Apple စတိုးတွင်ရရှိနိုင်မလားစမ်းပါ။
အီတလီအ ၀ တ်အထည်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သောစတိဗ်ဂျော့ဘ်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုယင်း၏ဖက်ရှင်ဆိုင်တွင်တင်ခဲ့သည်။ သူသည် Apple ကိုတရားရုံးတွင်ရိုက်နှက်ခဲ့သည်
ဤရွေ့ကားတစ်ချိန်ကဖြုတ် iMac Pro ကို၏ update ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ကြသည်
OWC ကုမ္ပဏီသည်ကွန်ပျူတာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုသိရှိရန် iMac Pro ကိုဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Apple က Lisa ကို software ကို 2018 ခုနှစ်တွင်
Apple Lisa ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ ၃၅ နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ ဂုဏ်ပြုဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုစတင်ပါတော့မယ်
ဂျွန်ဘရူနို (ဂ်) သည်ဂူဂဲလ်၏အက်ပဲလ်အင်ဂျင်နီယာကိုလက်မှတ်ထိုး
Google ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာတွေဖန်တီးချင်တယ် ထို့ကြောင့် Apple A အတွက်တာဝန်ရှိသည့် Apple အင်ဂျင်နီယာဂျွန်ဘရူနိုအားလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်
arscar Rodríguezသည် Apple Spain ရှိ Country Manager ရာထူးမှထွက်ခွာသည်
အက်ပဲလ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ... ဒါက ...
iMac Pro အသစ်၏မုန်တိုင်းထန်သော desktop wallpaper ကို download လုပ်ပါ
နောက်ခံအသစ်နှင့် iMac Pro ၏သီးသန့်ဝေါလ်ပေပါများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လင့်ခ်ပေးထားသည်။
ဒီတစ်ခါမှာအားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုကို iMessage မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
အသုံးပြုသူ Khaos Tian သည် iPhone မှထွက်ပေါ်လာသည့် iPhone ကို အသုံးပြု၍ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအားနည်းချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အက်ပဲလ်ဟာအမှားပြင်ပေးလိုက်ပြီ
Self-Driving Car Software အကြောင်း Apple ကမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်
မူပိုင်ခွင့်များသည် Apple ၏နောက်ခြေလှမ်းများကိုအလင်းရောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒီရေသည်သင်၏ HiFi ဝန်ဆောင်မှုကို ၁၂ ရက်ကြာဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲစမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည်
Tidal ၏ HiFi ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အမြဲတမ်းလိုချင်သည်ဆိုပါကဒီဇင်ဘာ ၂၅ မှဇန်နဝါရီ ၅ အထိအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည်
LG သည်မိုfor်းချုန်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်3နှင့်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည့် Mac အတွက်၎င်း၏မော်နီတာများအားသက်တမ်းတိုးသည်
LG သည်လာမည့် CES တွင် 4k နှင့် 5k resolution ရှိသည့်မော်နီတာအသစ်သုံးမျိုးနှင့် thunderbold3နှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုရှိသည်။
27 ၂၇ လက်မ iMac ကိုဥရောပရှိပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောနေရာတွင်တွေ့ရသည်
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော ၂၇ လက်မ iMac 5k ကိုဥရောပ၌ရောင်းချသည်။ ၎င်းတို့ကိုအွန်လိုင်းစတိုးများမှဝယ်ယူပြီးတစ်နှစ်အာမခံလည်းရနိုင်သည်။
ဒီရေဒီယို streaming ဂီတဝန်ဆောင်မှုကို Apple TV တွင်ရနိုင်သည်
Tidal ၏နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု, ၎င်းကို Apple TV အတွက်အထူး app တစ်ခုစတင်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်
အမေဇုံကအက်ပဲလ်တီဗီကို ၄ နာရီအကြာမှာရောင်းပြီးရောင်းလိုက်ပြီ
အမေဇုံသည် Apple TV 4k ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက် Amazon အရောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရောင်းချပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကုန်ဆုံးသွားသည်။ အက်ပဲလ်ဟာ 64gb model ကုန်သွားပြီ
ပိုလန်နိုင်ငံသည် Apple Pay ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ခံစားရမည်
ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာကပိုလန်နိုင်ငံသည် ... သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပဲ့တင်ထပ်ခဲ့သည်။
MacOS နှင့် iOS အတွက်ပေါင်းစည်းထားသော application များသည် Apple ၏စားပွဲပေါ်မှာရှိနေလိမ့်မည်
၎င်းသည်ကျော်ကြားသော Bloomberg မီဒီယာမှလာသည့်ကောလဟာလသို့မဟုတ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီး၊
9 × 15 Podcast - နားကြပ်များနှင့်စီစဉ်ထားသောအငွေ့အသက်များ
အိုင်ဖုန်းရာသီ၏ဆယ့်ငါးကြိမ်မြောက်အဖြစ်အပျက်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Mac podcast မှဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
တရုတ်စတိုးဆိုင်မှကုမ္ပဏီတခုသည်အက်ပဲလ်စတိုးတွင်တူညီသောလိုဂိုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် Apple ကိုရှုတ်ချသည်
တရုတ်နိုင်ငံမှာ Apple ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နောက်ဆုံးပြproblemနာကတော့ App Store ကနေအခြားသူတစ် ဦး ၏ကူးယူခြင်းအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်
အနာဂတ် Apple Store ကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်တင်ပြခြင်း၊
အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ streaming video division အတွက်မန်နေဂျာသစ်နှစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်
Cupertino ယောက်ျားလေးများသည်သူတို့၏ streaming video division အတွက်ဝန်ထမ်းသစ်များကိုနောက်နှစ်တွင်အလင်းရောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်ငှားရမ်းနေကြသည်
Noel Gallagher နှင့် Sam Smith တို့သည် Apple Music သို့သီးသန့်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်
အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အထူးသီးသန့်သည်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြီးသွားပြီဟုထင်ရသည့် အချိန်မှစ၍ ...
သင်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှုတစ်ခုကိုသင်တွေ့ပါကသင်၏ Airpods ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ Apple မှာ AirPods ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေရင် ...
ခရစ္စမတ်ပွဲမတိုင်မီ Apple တွင် AirPods မပို့နိုင်တော့ပါ
၀ ယ်ယူပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အခါ AirPods ၏ပို့ဆောင်ချိန်သည်တစ်ဖန်တိုးလာသည်။ ၁၀-၁၅ ရက်လောက်ကြာတယ်
500th Apple Store ကိုတောင်ကိုရီးယား၌ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်အက်ပဲလ်သည်တောင်ကိုရီးယားတွင်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်မည့်ဆိုင်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ၅၀၀ တွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်လိမ့်မည်။
iMac Pro၊ Apple Store Valencia မှခိုးယူမှု၊ MacOS High Sierra Beta နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ငါ Mac ကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
ခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချဉ်းကပ်နေကြပြီးယနေ့သည်တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၇ ရက်ဖြစ်သည်။
Apple ကသင့်ကို Apple Music မှာလတစ်လပေးဖို့ကုဒ်တွေနဲ့အီးမေးလ်တွေပို့နေတယ်
အကယ်၍ သင်သည် Apple ၏ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော Apple Music ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစာရင်းသွင်းလျှင်မှန်ကန်စွာသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
စပိန်တွင်ယခုနှစ် 2017 တွင် Apple Music ၏အကျော်ကြားဆုံးမှာ Ed Sheeran, Luis Fonsi နှင့်Joaquín Sabina ဖြစ်သည်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအက်ပဲလ်သည်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ iBooks, Podcasts, ဂီတနှင့်အခြားအရာများတွင်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုပြသသည်။
မူပိုင်ခွင့်အသစ်သည် Siri အားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသံသံကိုတုပနိုင်သည်
Apple မှတင်သွင်းသောမူပိုင်ခွင့်အသစ်တွင်အသံ modulation system ကိုညွှန်ပြသည့်လက္ခဏာများပြသနေသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိမီးလောင်ကျွမ်းမှုဒဏ်ခံရသူများအား Apple ကနောက်ထပ်ဒေါ်လာတစ်သန်းလှူဒါန်းခဲ့သည်
ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒီအစွန်းရောက်အခြေအနေတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ...
လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏အဆိုအရအက်ပဲပန်းခြံတည်ဆောက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အမြင့်မားဆုံးဖြစ်သည်။
HomePod Firmware အသစ်ထွက်လာပြီ
HomePod စပီကာကိုစတင်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မျှော်လင့်ရသည်။ သင်၏စမ်းသပ်သူများသည် debugging ဆက်လုပ်နေပြီး Firmware အသစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်
Apple Maps သည်လေဆိပ် ၃၄ ခု၏အတွင်းပိုင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်သည်
ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှု Tidal သည်၎င်း၏ရက်များကိုရေတွက်နိုင်သည်
ဂျက်ဖ်ဝီလျံက Apple သည်မြောက်အမေရိကထုတ်လုပ်သူများအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
ဒီဟာအသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Apple သည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အပိုကြိုးပမ်းနေသည်။
သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ရှိစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်ယခု အချိန်မှစ၍ Mac များအတွက် ၃ နှစ်အထိသက်တမ်းတိုးခြင်းဖြစ်သည်
များသောအားဖြင့် AirPods နှင့် Apple ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ထိုအစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
AirPorts များအတွက် KRACK WiFi အားနည်းချက်ကိုပြင်ဆင်ရန် Update ကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်
အိမ်တွင် Apple Wi-Fi အခြေစိုက်စခန်းရှိသူအားလုံးသည်ဤအားနည်းချက်ကိုထိတွေ့မိခြင်းဖြစ်သည် ...
Apple သည်အသုံးပြုသော Mac များအတွက်၎င်း၏ buyback program ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သည်
ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် Apple သည် Phobio နှင့်အတူ၎င်း၏ buyback အစီအစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။
ကျောင်းသား ၅၀၀,၀၀၀ သည်အက်ပဲလ်၏မြို့တော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောကန ဦး အစီအစဉ်သစ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အလားအလာရှိသောအခွင့်အရေးရရှိလိမ့်မည်။
ဘရာဇီးသည် Apple Pay ကိုစတင်မည့်နောက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တော့မည်
ထို့အပြင် Apple Pay ၏တိုးချဲ့မှုသည်တဖြည်းဖြည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထိရောက်မှုရှိလာသည်။
HomePod နှောင့်နှေးခြင်းတရားမျှတ? Apple ကဒီအကြောင်းပြောခဲ့တယ်
ဒီနေ့ခေတ်နည်းပညာနယ်ပယ်ထဲကိုခုန်တက်သွားတဲ့နောက်အချက်တစ်ခုကတော့ HomePod, စပီကာကို NO ရောက်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
iMac Pro ရောက်ရှိခြင်းသည် Apple အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
Apple က Shazam ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီးမကြာသေးမီကပြောခဲ့သည့်ကောလာဟလများကိုအတည်ပြုသည်
ရှည်လျားသောကောလာဟလသတင်းများထွက်ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့တွင် Apple မှ Shazam ကိုဝယ်ယူလိုက်သည်။
Shazam, Apple ရဲ့မီးမောင်းထိုးပြအတွက်
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကောလာဟလများပိုမိုများပြားလာရာ Apple သည်တနင်္လာနေ့တွင် Siri ဝယ်ယူကြောင်းကြေငြာနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ရက်လီမြို့ရှိပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော Apple Store ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ
Jony Ive သည်သူ၏ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများရရှိပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင် Apple ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ပြန်လာသည်
Bloomberg မှ Apple Ion ၏ဒါရိုက်တာနှင့်ကိရိယာဒီဇိုင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းအဖြစ် Jonathan Ive ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကိုကြားရသည်။
တရားဝင် MacOS High Sierra update၊ Amazon Prime Video, 2018 ခုနှစ်တွင် AirPods နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
ထိုအဟုတ်, ငါတို့ 2017 ကျော်ဒီဇင်ဘာလ၌ပြီးသားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကယ့်ကိုလွန်ပြီဟုပြောနိုင် ...
ဘဏ်သစ် ၃၅ ခုနှင့်ချေးငွေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည် Apple Pay Russia, Japan, USA နှင့် Canada တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Apple Pay ကိုထောက်ပံ့သောဘဏ်အရေအတွက်ကို Apple ကဆက်လက်တိုးချဲ့နေသည်။ ဤအခါသမယတွင်ဂျပန်၊ ကနေဒါနှင့်ရုရှားတို့အကျိုးရှိခဲ့သည်
ဒီရေမှနောက်ဆုံးသတင်းကကျွန်တော်တို့ကို CarPlay နှင့်သုံးရန်ခွင့်ပြုသည်
"rich" အတွက်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှု Tidal သည် Apple CarPlay နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်၎င်း၏ application ကိုယခုအသစ်တင်လိုက်သည်။
Podcast9× 13: Apple မှာခရစ်စမတ်နီးလာပြီ
နောက်ထပ်သီတင်းပတ်တစ်ခုမှာအက်ကွတ်အိုင်ဖုန်းနှင့် Soy de Mac အဖွဲ့သည် Apple နှင့်သက်ဆိုင်သောဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
2017 ခုနှစ်တွင် YouTube တွင်လူကြိုက်အများဆုံးကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်သည့် Siri နှင့် The Rock
Apple သည်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Siri နှင့် The Rock သရုပ်ဆောင်မင်းသား ၂၁၇ ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ နေရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
North Carolina ရှိ Crabtree Valley Mall တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Apple စတိုး
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Apple စတိုးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတွင်ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ The …
အနည်းဆုံးတော့နှစ်စဉ်နောက်ဆုံးရရှိသော "အကောင်းဆုံးနေရာများအတွက်အလုပ်" အဆင့်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။